3.29.20 Ukuvuselelwa kwe-COVID-19 – Izikole zasekhaya iMason City COVID-19
3.29.20 Ukuvuselelwa kwe-COVID-19
Siyethemba ukuthi umndeni wakho ukwazile ukuthola izingqimba zesiliva ngalesi sikhathi se-COVID-19 Spring Break. Ake uzinike umusa, futhi wazi ukuthi izikole zakho zilapha kuwe futhi sizokwazi ukukwenza lokhu – ndawonye.
Bheka lokhu umlayezo wevidiyo kusuka ku-Superintendent Jonathan Cooper njengoba abelana ngalokho okuguqukayo esifundeni sethu kuya ekuqhubekeni, okuhlangenwe nakho kokufunda okude kuzobukeka kuleli sonto.
Kusukela izolo izolo ngo 2pm, awekho amacala aqinisekisiwe e-COVID-19 eMason City School, futhi 1,406 amacala aqinisekisiwe e-Ohio. Ngezansi izimpendulo zemibuzo ejwayelekile evela emindenini yethu nasemphakathini.
Kungani lesifunda ekuqaleni beligxile ekuhlangabezaneni nezidingo eziyisisekelo zabafundi nokufunda kokungezelelwa?
Okusemqoka kakhulu kithi bekuwukuqinisekisa ukuthi sinezinhlelo zokondla izingane ezikoleni zethu ezibhekene nokushoda kokudla. Sijabule kakhulu kubasebenzi abondlayo bezingane nabasebenzi bezokuhamba abasebenza nabalingani bomphakathi njengeNdawo kaJoshua kanye neComet Cupboard ukwakha izingosi zokudla zabafundi eziyisikhombisa, kufaka phakathi ukwesekwa kokudla ngesikhathi sekhefu le-Spring. Chofoza lapha ukuthola ukuthi ungawuthola kanjani umndeni wakho ukudla uma ubhekene nokungavikeleki kokudla.
Bekubalule futhi ukuthi sinikeze abafundisi bethu isikhathi sokwakha amaImiyalelo Wokufunda Okukude futhi ufunde ukuthi ungawasebenzisa kanjani amathuluzi amasha ukusekela ukufunda okude. Othisha abaningi banolwazi lwangaphambilini ngamathuluzi okufunda akude futhi abanye othisha bazozama amasu amasha nezisombululo zobuchwepheshe okokuqala ngqa. Kuzoba namaqhubu okuqala, kepha ukufundiswa okukude nokusekelwa kuzothuthuka ngokuhamba kwesikhathi. Uyacelwa ukuthi ubekezele futhi ukhumbule ukuthi othisha abaningi bangabazali ngakho-ke bayaqonda ukuthi yini onayo!
Yini ingane yami nami esingayenza ukuze silungiselele ukufunda okude?
Manje yisikhathi esihle sokuqinisekisa ukuthi ingane yakho iyakwazi ukufinyelela kudivayisi efana ne-Chromebook noma i-laptop nokuthi umndeni wakho ungena kwi-inthanethi. Uma udinga usizo lokuxhuma kunoma iyiphi yalezi zisetshenziswa, ngicela uthumele i-imeyili [email protected].
Ngaphezu kwalokho, ukuthatha lezi zinyathelo ezilandelayo kuzosiza ekuqinisekiseni ukuthi ingane yakho ifinyelela izinsiza lapho zabiwe:
Uma ingane yakho ikumabanga PK-4, uzothola i-imeyili yansuku zonke evela kuthisha wengane yakho(s) ekhelini le-imeyili eza ngalo. Sicela wazame uthisha wekilasi lengane yakho uma ukhetha ukuthi i-imeyili ithunyelwe ekhelini elihlukile le-imeyili.
Uma ingane yakho ikumabanga 5-12, sicela uqinisekise ukuthi uyakwazi ukungena kwi-Schoology.
Ingane yami izoqala nini ukuthola izabelo zokusebenza kude?
Kuleli viki, Abafundi beMCS bazosebenza ezabelweni ze-Remote Learning Experience Oriuction ngoLwesine nangoLwesihlanu. Izabelo zizothunyelwa nge-imeyili noma zithunyelwe kwa-Schoology kusihlwa sangaphambilini (NgoLwesithathu) ukuvumela imindeni isikhathi sokuhlela (Ngokwesibonelo, uma bethatha izingane ziye kumnakekeli).
Ngenxa yalokho, Abafundi be-MCS kufanele bakwazi ukufinyelela ezabelweni zabo zokuqala ngalo Lwesithathu, Ephreli 1 ngo-8pm. Yabafundi abakwi-PK-4, lesi sabelo sizothunyelwa nge-imeyili kumzali / kumlondolozi wabo. Kubafundi emabangeni 5-12, isabelo sizothunyelwa kwi-Schoology.
Qaphela: Uma ingane yakho ithola imfundo eyisisekelo ekilasini elikhethekile kusuka kw uchwepheshe wokungenelela, uchwepheshe wokungenelela uzoxhumana nawe ngqo ukuthuthukisa amapulani ngamanye wokulethwa kwezifundo. Ngokwengeziwe, ochwepheshe bokungenelela bebelokhu futhi bezoqhubeka nokuxhumana nemindeni ukuxoxa ngezinhlelo zokusekela imfundo yendawo yokuqukethwe.
Yiziphi izabelo ze-Remote yokufunda Isifundo se-Remote?
Izabelo ze-RLE zokufundisa zizobandakanya abafundi kokuqukethwe okuhlobene nokuphepha kwidijithali kanye nokuziphatha okuhle ngenkathi kubukwa futhi okuqukethwe okungukhiye futhi kuvunyelwe nesikhathi sokwenza ubuchwepheshe obusha. Zenzelwe ukuvivinya amasistimu ethu futhi sivumele isikhathi sokuxazulula inkinga uma abafundi benenkinga yokufinyelela kuzo.
Ngabe ingane yami kufanele ngabe yenzani phakathi kwamanje noLwesine?
The Isiza se-MCS sokufunda iMommentum ihlinzeka ngezinsizakusebenza eziningi zemfundo ezikhiqizwe othisha bakaMason. Sigqugquzela abafundi bethu ukuthi bahlole lezi zinsizakusebenza ukuze bakwazi ukugcina amandla abo okufunda njengoba siguqukela ku-Isipiliyoni Sokufunda Esikude. Isiza sihlanganisa ikhalenda lemicimbi eminingi ebukhoma ebukhoma ukuthi umndeni wakho ungafisa ukuwuhlola! Futhi, kunjalo, ukuchitha isikhathi ufunda, Ukubhala futhi ukhuthele kuwumqondo omuhle njalo!
Bamba iqhaza kuChamber's Made ukuze udle i-Takeout Blitz futhi ubone ukuthi zingaki izindawo zokudlela zasendaweni ongazisekela. Ngaphezu kwalokho, nikela endaweni kaJoshua bese ukhetha i- “Comet Carryout” futhi ungabusisa umndeni oswele ngokudla kwelinye lamabhizinisi ethu endawo.
Yenza i-Homemade Facemasks: IWarren County icela izakhamizi ezinobuqili ukuthi zicabangele okwenza imaskhi yendwangu eyenziwe yasekhaya ngomzamo obanzi wokuhlinzeka izibhedlela zethu, izindawo zokunakekela isikhathi eside nabaphenduli bokuqala ngale ndlela evikelekile yobuso. Sesivele sabona ama-Comets amaningana engena esenzweni se- # CraftersAgainstCOVID19, futhi ngingathanda ukubona izithombe zakho!
Ngikufisela isonto elinempilo elizayo.